Bahamas waxay soo bandhigaysaa Bandhigii Xagaaga 2aad ee Virtual Junkanoo 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Bahamas waxay soo bandhigaysaa Bandhigii Xagaaga 2aad ee Virtual Junkanoo 2021
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Bahamas Junaknoo Festival Festival
Wasaaradda Dalxiiska iyo Duulista Hawada ee Bahamas ayaa isku diyaarineysa inay qabato Xafladda Xagaaga 2aad ee Virtual Junkanoo (JSF) 3 Sabti oo xiriir ah, Ogosto 14, 21 iyo 28, 2021.
Bandhigga Xagaaga ee Junkanoo waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Wasaaradda Dalxiiska ee Bahamas oo sannad walba dhaca.
Bandhigu wuxuu bilaabmay 2015 oo si weyn ayuu u koray wuxuuna helay sumcad aad u weyn.
Caannimada awgeed, Wasaaradda Dalxiiska ayaa qabanaysa munaasabaddan oo ballanqaadaysa inay noqon doonto mid xiiso badan.
Iiddii dalwaddu waxay hawada ka bixi doontaa DalxiiskaTodayBahamas bogga Facebook waxayna soo bandhigi doontaa wax walba Bahamian, caadooyinka, caadooyinka, cunnooyinka Bahamiya, iyo farshaxanka iyo taariikhda Junkanoo. Dhacdadan dalwaddu waxay u oggolaanaysaa Wasaaradda Dalxiiska inay sii waddo dadaalladeeda ku aaddan in qof walba ammaankiisa la sugo, iyadoo la ilaalinayo hidaha dhaqanka.
Bandhigga Xagaaga Junkanoo waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Wasaaradda Dalxiiska oo sannad walba dhaca. Tan iyo markii la aasaasay 2015, iidku si weyn ayuu u koray wuxuuna helay sumcad aad u weyn. Xaggaas, Wasaaradda Dalxiiska iyo Duulistu waxay ku martiqaadeysaa qof walba inuu ka soo qeybgalo dabaaldegga maadaama ay soo bandhigeyso waxa run ahaantii Bahamian ah.
Ku soo biir dhoolatuskan dalwaddii ah ee hibada Bahamian ee heerka sare ah, oo ay ku jiraan kuwa kale, Ira Storr iyo kooxda Spank, Geno D., Lady E, iyo Veronica Bishop. Waxaa kaloo xafladda marti ku ah Bahamiyan fannaaniinta iyo kuwa curiya heesaha Dyson iyo Wendy Knight waxayna ku dhammaan doontaa bandhig toos ah oo Junkanoo ah oo ay qaadayaan kooxda junkanoo oo dhan.
Bandhiggan aadka loo sugayo, inkasta oo uu yahay mid dal-ku-yaal ah, wuxuu ballan-qaadayaa inuu noqon doono madadaalo iyo soo jiidasho wuxuuna soo bandhigi doonaa dhinacyo muhiim u ah dhaqanka Bahamian, sida hal-abuurka dadkiisa, muusigga iyo qoob-ka-ciyaarka, sheekooyinka, cunnada Bahamiya, iyo noocyo kala duwan oo cabbitaanno maxalli ah.